Ọmụmụ gemology - Gemology N'ezie - Mmelite ọhụụ dị na 2021
NEW : Na-amụ gemology n'ịntanetị
N'ihi nnukwu ọchịchọ nke ụmụ akwụkwọ anyị na-enweghị ike ịga njem kemgbe Machị 2020, ọ ga-ekwe omume ịmụ akwụkwọ n'ịntanetị.
Anyị na-eji ngwanrọ dị iche iche maka nkuzi na sistemụ igwefoto dị iche iche: Mbugharị, Skype, WeChat, WhatsApp… Anyị nwere ike iji sọftụwia ọ bụla ọzọ dị ka mmasị gị si dị.
Gịnị bụ gemology?
Anyị na-akụzi gemology na Bekee ma ọ bụ asụsụ French
Ụbọchị nkeji (awa 3)
Ụbọchị zuru ezu (2 x 3h = 6 awa)
Sịntetik & ọgwụgwọ
Nye ọnụahịa & nhazi
Gemology bu sayensi nke ihe ndi ozo, ma obu ihe omuma nke alaka ulo akwukwo nke sayensi. Ọmụmụ gemology na-ekpuchi akụkụ niile nke teknụzụ nke nkume dị egwu na ihe dị egwu.
Ihe omimi ha, nke aru na nke anya, usoro eji emeputa ihe omuma na ihe ndi mmadu, igbutu na ichi ocha, na ihe ndi ozo bu ihe omuma na ihe ndi ozo eji eme ihe, nhazi na nyocha nke nkume.
Okwu a bu 'ihe omuma' na-ekpuchi otutu ohere. Imirikiti ihe ndị dị oké ọnụ bụ mineral, mana nke 3000 ma ọ bụ karịa, mineral ndị mmadụ maara, ọ bụ naanị ihe gbasara ezinụlọ 70/500 nkume a na-ahụta ka ha nwee àgwà ndị a na-akpọ ụdị pụrụ iche a na-akpọ nkume dị egwu.
Okwu mmeghe nke nkume di egwu nke anakpo n’ ahia. Mbido a, ọganihu ma ọ bụ ọkwa ọkachamara ọkachamara na-emesi akụkụ dị mkpa nke bara nnukwu uru.
Onye 1: 200 $
2 ka 4 mmadụ: 120 $ / kwa onye
Onye 5 +: 100 $ / kwa onye
Onye 1: 400 $
2 ka 4 mmadụ: 240 $ / kwa onye
Onye 5 +: 200 $ / kwa onye
* Ọnụ ahịa ahịa metụtara naanị ọnụ ọgụgụ mmadụ si na ntinye akwụkwọ gị * Iwepu izu opekata mpe 2 n’ihu Biko kpọtụrụ anyị maka ntinye akwụkwọ.
Kedu otu ị ga-esi daba n'ọnyà nke ndị na-ere ahịa gemstones adịgboroja? Kedu otu esi amata gemstones eke, njikọta, ọgwụgwọ? Etu esi atụle ogo na ọnụahịa? Ga - enweta azịza nye ajụjụ gị niile n'oge klas a
Ihe omume klaasị gụnyere:
site na ụdị
site na mbido
ihe nlere nke gemstones
Iko ndozi / okpukpo mmịpụta / mgbapu
Iling gha mmanụ
Hapụ nghọta na klas ahụ nke ebe gemstones sitere na otu esi amata akụkụ dị iche iche ha nke ọma.
PRỌFESỌ Dr. Dr. MOHAMED MOHAMED TOLBA SAID, emechaala ọzụzụ na gemology. Bọchị 1 (awa 6) “Na 15 Eprel 2015 ejiriwo m ụbọchị na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ maka ịmụ gemological kpụ ọkụ n’ọnụ na Gemological Institute nke Cambodia, Maazị Jean-Philippe bụ onye nkuzi m n’oge awa isii nke mmụta, Ọ bụ ọkachamara na gemology. Echere m na emolọ Ọrụ Gemological Institute nke Cambodia bụ ebe kwesịrị ekwesị iji nweta ihe ọmụma banyere gemology na nkume ndị dị oké ọnụ ahịa. ”
Maazị SERGIO (onye Italytali) na Nwada WIRIYA (si Thailand) emechaala ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3) “Philippe il proprietario è una persona molto competente e professionale nel campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata in cui ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e non… insomma se volete comprera e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem na-ewe ihe ubi. Inoltre se volte ”- Mee 5, 2015
Maazị CARL (nke si England) na Nwada AGYNESS (si China) agụchaala ọzụzụ na gemology. Bọchị 1 (awa 6) Ọnwa Asaa 30, 2015
Maazị Toh Hock An (site na Taiwan) emechaala ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3) Ọgọst 15, 2015
Nna ukwu Hanz Cua (site na Philippines) emechala ọzụzụ ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3) Ọnwa iri 15, 2015
Nwanyị Ramya Ponnada na Mazị Krishna Kanth Ponnada (nke si India) emechaala ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3) Nọvemba 12, 2015
Maazị Sonny Rodriguez na Nwada Tiffany Rodriguez (nke sitere na Philippines) emechala ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3)“Ọ bụrụ na ọ dị mkpa na ị ga-enweta nkume ndị bara uru, gaa ebe a” - M na-achọ azịza gbasara nkume dị egwu a na-ere na ahịa ochie ma ebe a nyere m ozi niile m chọrọ iji mara eziokwu nke bara nnukwu uru. O doro anya na ọtụtụ ụlọ ahịa dị egwu n'ahịa ga-eresị gị ndị adịgboroja.
M debanyere aha na ụlọ ọrụ 3hour ma ọ na-agbasawanye ihe ọmụma m banyere nkume dị egwu. Ha nyere m akwụkwọ mgbe emesiri ma ọ bụ n'ezie 3hours kwesịrị ekwesị. Maazị Jean nwere mmasị n'ezie n'ihe bara nnukwu uru. Lelee ebe nrụọrụ weebụ ha, kpọtụrụ ha na ha ga-enwe tuk-tuk kpọtụrụ gị na họtel gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ị nweghị mmasị n'ịmụ bara nnukwu uru naanị gaa ma hụ nnukwu nkume ọ nwere ike ire ere - Nọvemba 12, 2015
Maazị Thorstein na Mr. Widar (nke si Norway) emechaala ọzụzụ na gemology. Daybọchị ọkara (awa 3) Nọvemba 16, 2015
Tom na Kristin (si USA) & Norma na Trevor (si Canada) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. November 22, 2015
Konstantin na Silviya (site na Bulgaria). November 28, 2015
Miles, July, Rosie, Tilly & Celeste (nke si England). December 22, 2015
Nwada Lee Hui Yun (onye Singapore). December 23, 2015
Annick & Maxim (onye si Australia). December 28, 2015
Jasmine, Bruce & Allan (onye si Philippines). December 29, 2015
Marc & Lani, Site na Los Angeles, California, USA January 10, 2016
Nwada Ruth, si Indonesia January 12, 2016
Mr. Jeff, si USA January 13, 2016
Joshua & Michael, si USA January 20, 2016
Stephanie & Mason, si Hong Kong January 21, 2016
Gary, Diane & Barb, si USA January 21, 2016
Anna & Diana, si Russia February 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, si Malaysia “Awesome nleta - na-akpali ma anya oghere” - Great ebe ileta! Anyị were nkuzi elekere 1, nke mechara bụrụ obere karịa n'ihi oke mmụta a na-ekenye Jean. Jean dị oke mma na ọ bụghị naanị ịkọwa ụdị okwute dị iche iche, mana ọ dịkwa oke mma na ịme ka ọ dịrị ndụ na gburugburu Kambodia yana akụkọ dị jụụ. Nakwa ngosipụta dị oke mma na ụlọ nyocha ebe ị ga-ahụ ụdị bara nnukwu uru ma gbalịa ịchọpụta nke dị adị, mesoo ma ọ bụ nke sịntetik! Enwekwara oke nhọrọ nke Gems dị na Kambodia ịzụrụ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya mgbe nkuzi ahụ gasịrị. Mụtara a ọtụtụ, nwere a otutu fun na-ekpe na a mma Kambodia mkpuru na a ọhụrụ hụrụ ekele maka gemology! - Febụwarị 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, onye si Gris February 7, 2016
Nwada Katherine, si Spain, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. February 10, 2016
Naho, si Japan & William, si UK, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. February 15, 2016
Philip, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. February 19, 2016
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, si Denmark, agwụchara ọzụzụ na gemology. February 20, 2016
Nwada Jerica, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. March 4, 2016
Nwada Lena, si Ukraine, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Agara m ụlọ akwụkwọ ahụ ịmatakwu banyere okwute ndị Kambodia. Ekwesịrị m ịsị ebe a mere nke ọma maka mmadụ niile - ndị ọbịa, ndị nduzi, ndị ọkachamara, ndị na-azụ ahịa. Ebe i nwere ike ịhụ na 'ahụmahụ' niile ụwa nkume. Ihe omuma doro anya, ikuku di ebube. Ọ ga-amasị m ịkele Philippe maka nkuzi mara mma - Machị 14, 2016
Javier & Andrea, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. March 24, 2016
Tanya, Sebastian & Scott, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Anyị kpọọrọ nwa anyị nwoke 8 dị afọ otu maka na ọ nwere mmasị na nnukwu ihe, nkume na kristal. Jeanne-Pierre tinyere ihe karịrị oge ewepụtara ma nwee oke nghọta na ịnụ ọkụ n'obi n'okwu gbasara ịmụ anya. Nwa anyị nwoke nwere obi ụtọ na usoro a, dịka anyị mere, ọkachasị nnọkọ n'ụlọ nyocha, na-achọpụta ihe dị iche iche n'okpuru microscope. Obi dị ya ụtọ ịpụ na asambodo yana okwute Praseolite. Daalụ. - Machị 29, 2016
Sangita & Daniel, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology April 3, 2016
Hilary & Ian, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. April 4, 2016
Maria & Joanna, si Philippines, ka dechara gemology N'ezie na gemology. Were usoro ụbọchị ọkara na gemological institute. Ọ bụ nnọọ ihe ọmụma! Mgbe usoro a gasịrị, anyị nwere obi ike karịa 100% karịa gbasara ịtụle nnukwu nkume. - Eprel 8, 2016
O'Malley Family, si USA, mgbe ọzụzụ N'ezie na Gemology. April 14, 2016
Silvester & Silvia, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Nwere ike 12, 2016
Nwada Akemi, si Japan, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Nwere ike 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, si Philippines, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Nwere ike 29, 2016
Ma. Luz, si Philippines, & Gordon, si UK, dechara gemology N'ezie na gemology. Nwere ike 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. June 16, 2016
Jamie & Ellie, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. July 18, 2016
Pauline & Ronan, si France, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. August 1, 2016
Sue, Maureen & Bruce, si USA, agụchaala ọzụzụ na gemology. August 11, 2016
Anne & Olivier, si France, ka dechara gemology N'ezie na gemology. August 18, 2016
Max & Hester, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. August 19, 2016
Carrie & Martijn, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. August 20, 2016
Katherine, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọnwa Itolu 8, 2016
Allesha & Ross, si USA, ka dechara gemology N'ezie na gemology. Ọnwa Itolu 10, 2016
Mr.Thiery, si France, ka dechara ndị ọzụzụ N'ezie nke otu izu (30 awa) ke gemology. Ọnwa Itolu 26-30, 2016
Ali & Joe, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. October 20, 2016
Lenny, anyị nke kasị nta na-amụrụ, si France, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. October 21, 2016
Steven & Jene, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. December 5, 2016
Fiona & Shah, si England, ka dechara gemology N'ezie na gemology. December 9, 2016
Aislinn & Dominique, onye Hong Kong.December 12, 2016
Biko kpọtụrụ anyị maka ntinye akwụkwọ.